Thermopile Infrared Temperature Sensor ho an'ny Smart Home Application
Ny rivotra mifono rivotra marani-tsaina mampiasa sensor infrared thermopile dia hafa noho ny rivotra mahazatra nentin-dra. Ny sensor dia azo ampiasaina hamantarana raha misy loharano mafana amin'ny faritra atsofoka, mba hifehezana ny làlan-drivotra sy ny haben'ny rivotra arakaraka ny tena zava-misy.
Ny fampiharana ny sensor infrared thermopile ao anaty vata fampangatsiahana, afaka mahatratra ny fandrefesana mari-pana marina, manana ny toetran'ny valinteny haingana, afaka manome ny toerana fitahirizana tsara indrindra ho an'ny sakafo ao anaty vata fampangatsiahana.
Ny fandrahoana fampidirana miaraka amn sensor infrared thermopile dia afaka mandrefy ny mari-pana marina, izay afaka mamaha ny olana fa ny lafaoro fampidirana nentim-paharazana dia tsy afaka manitsy avy hatrany ny mari-pana fanafanana arakaraky ny mari-pana napetraka, ary tsy mahatratra ny fifehezana ny mari-pana marina, izay miteraka fako angovo sy afo. mora ateraky ny fandoroana maina.
Ny lafaoro mikraoba manan-tsaina miaraka amin'ny sensor thermopile infrared dia tsy mitovy amin'ny lafaoro microwave mahazatra. Izy io dia afaka manitsy ny tanjaky ny mikraoba amin'ny fandrefesana ny mari-pana ara-tsakafo amin'ny fotoana tena izy, mba hahatratrarana ny fahombiazana sy ny fitsitsiana angovo, ary hahazoana antoka fa matsiro kokoa ny sakafo.
Ny kettle elektronika manan-tsaina miaraka amin'ny sensor thermopile infrared dia hafa noho ny kettle elektronika nentim-paharazana. Izy io dia afaka mandrefy ny maripana marina amin'ny kettle amin'ny fotoana tena izy, misoroka ny fandoroana maina, ary mamonjy angovo amin'ny alàlan'ny fanafanana manan-tsaina.
Ny ventilator an-dakozia marani-tsaina miaraka amin'ny sensor thermopile infrared dia hafa noho ny ventilator an-dakozia nentim-paharazana. Amin'ny alàlan'ny fandrefesana ny mari-pana ny vilanin-tsakafo amin'ny tena izy dia voafehy ny mpankafy hanatsara ny tahan'ny fidiran'ny setroka menaka ary hitsitsy angovo amin'ny fomba mahomby.